ओलीलाई देउवाले दिएको तीन सन्देश Canada Nepal
ओलीलाई देउवाले दिएको तीन सन्देश
रौनक निरौला श्रावण ४ २०७८
काठमाडौं । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारलाई विस्तापित गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा जाने इच्छा नदेखाउँदा नदेखाउँदै कम्युनिष्ट नेताहरुकै बुई चढेर देउवा आगामी दिनका लागि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
अल्पमतको कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कम्युनिष्ट नेताहरुले प्रदान गरेपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवा सरकारलाई आइतबार प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमतले विश्वासको मत दिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते सत्तारोहण गर्दा र पछि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेपछि ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त थियो । तर, समय वित्दै जाँदा ओली सरकार अल्पमतमा पर्दै असंवैधानिक कदम चालेको आरोपको पुलिन्दा बोकेर सत्ताच्यूत हुन पुग्यो ।
अन्ततः कम्युनिष्टलाई जनताले मत दिए पनि कम्युनिष्ट नेताले कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पियो । यस अवस्था कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीन सन्देश दिएका छन् । जुन निकै महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
१. संसद्‌बाट सरकार सम्भव
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन नसक्ने जिकीर गर्दै संसद् विघटन गरेका थिए । तर, देउवाले आइतबार पाएको विश्वासको मतले ओलीको जिकीर र तर्कलाई खारेज गरिदिएको छ । ६१ सांसद रहेको देउवा सरकारले १६५ मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसक्ने ओलीको अडानले देउवाले गलत सावित गर्दै संसद विघटनको औचित्य कायम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
२. प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलको
तत्कालीन नेकपाको सरकार होस् वा पछि एमालेकै सरकार किन नहोस् प्रतिपक्षी दलहरुमाथि संसदमा बन्देज लगाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कांग्रेस नेताहरुले संसदमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको, बोल्न नदिएको, सरकारले संसदलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी दलका नेताहरुमाथि आक्रमकरुपम प्रस्तुत हुने, मार्सल लगाएर आफ्नो एजेण्डा पारित गराउन खोज्ने प्रयास गरेका थिए ।
तर, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद प्रतिपक्षी भएकाले आफू धेरै नबोल्ने बताए । ‘संसद प्रतिपक्षी दलको हो, म धेरै बोल्दिनँ, ठूल्ठूला स्वरमा सरकार बोल्दैन, यसरी विपक्षी दल बोल्ने हो, सरकार र सरकार पक्ष शान्त रहन्छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने । संसद प्रतिपक्षी दलको भएकाले सरकारले संसदमा सुन्ने र सोहीअनुसार काम गर्नु पर्ने सन्देश देउवाले ओलीलाई दिएका छन् ।
३. नेतृत्वदायी क्षमता
नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमत चाहिने सन्देश देउवाले ओलीलाई दिएका छन् । मौजुदा प्रतिनिधि सभामा ओलीले दुई तिहाइ प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर, नेतृत्वदायी क्षमताको कमिले अल्पमतमा पर्दै ओली सत्ताच्यूत भएसँगै देउवाको सत्तारोहण भयो । ओलीले सरकारको समर्थनमात्रै खण्डित गरेनन्, आफैँले नेतृत्व लिएको नेकपा खारेज भयो भने एमाले पनि विभाजित अवस्थामा छ ।
तर, अल्पमतमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवा भारी बहुमतसहित विश्वासको मत पाएर शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ६१ सांसद रहेको कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्वदायी क्षमता देखाएर १६५ मत सहित विश्वासको बहुमत पाए । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेको नेपाल समूहको मात्रै होइन ओली समूहकै सांसदहरुको मत पाए ।
मुलुकमा आन्दोलन कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ । तर, मुलुक जटिल मोडमा पुग्दा कांग्रेसको मौनतामाथि विभिन्न प्रश्न उब्जाइएको थियो । तर, यसपटक देउवा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियत पाएका प्रमुख दलको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएका हुन् ।
आफूसँग बहुमत भएर मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्न नसकिने र यसका लागि नेतृत्वदायी क्षमता चाहिने सन्देश देउवाले ओलीलाई दिएका छन् ।
श्रावण ४, २०७८ सोमवार ११:३९:२७ बजे : प्रकाशित